Isbedel ballaaran oo lagu sameeyn doona idaacadda Radio Sweden - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
چاوپێداخشاندنێک بەسەر بابەتە گرنگەکانی ئەم هەفتەیەی کوردانی نیشتەجێی سوید لەسەر فەیسڤبووک
Isbedel ballaaran oo lagu sameeyn doona idaacadda Radio Sweden
La daabacay torsdag 21 januari 2016 kl 13.44
Laanta idaacadda Raadiyaha Sweden ee ku hadasha luuqadaha kala duwan (Radio Sweden) ayuu dhowaantan ku dhici doona is-bedel ballaaran.
Laanta idaacadda Raadiyaha Sweden ee ku hadasha luuqadaha kala duwan (Radio Sweden) ayuu dhowaantan ku dhici doona is-bedel ballaan.
Laba ka mid ah laamaha, kuwaasina oo kala ah laanta af-jarmalka iyo afka Ruushka ayaa gebi ahaan albaabbada loo laabi doonaa.
Madaxa Radio Sweden Ingemar Löfgren ayaa tallaabadaa ku macneeyay in labada laamood ee ruushka iyo jarmalku yihiin haraagii barnaamijyadii idaacadda ka bixi jirey ee loogu talo galey dibadda.
- Iminka dhagaxa ayaannu rogeeynaa. Waxaannuna xoogga isugu geeyneynaa bulshada iswiidhishka ee dalka ku cusub. Waxaanan oran karaa iney labada laamood ee ruushka iyo jarmalku yihiin haraagii barnaamijyadii idaacadda ka bixi jirey ee loogu talo galey dibadda, sida uu sheegay. Isagoo hadalkiisii siiwatana sheegay:
- Waxaan u arkaa sidiiyoo ay tallaabadaasi tahay mid sugeysa sidii loo xaqiijin lahaa labada garab-howleed ee laamaha hor-yaala. Mana ahan inay noqoto in koox suxufiyiin ah ah ayaa la mataanoobey Ekot oo ay laantu liqdo, kuna howlanaadaan tarjumidda wararka laanta ka baxa oo keliya, sida uu sheegay madaxa laanta idaacadda Sweden Ingema Löfgren.
Halka dhanka kale shan ka mid ah laamaha Radio Sweden ee maanta, carabiga, ingiriisiga, kurdiga, peershiyanka iyo soomaaliga lala mataaneeyn doonaa laanta wararka idaacadda ee Ekot.
Sida uu sheegay madaxa barnaamijyada ee idaacadda Sweden Björn Löfdahl inuu is-bedelkani salka ku hayo sidii howlaha wararka idaacadda Raadiyaha Sweden loogu abbaari lahaa is-bedellada ka dhacaya caalamka. Iyo in dhageeysteyaal intaa ka badan ay idaacaddu gaari doonto, middaasina loo mareyo in qayb ka mid ah laanta Radio Sweden lala mataaneeyo laanta wararka ee Ekot.
Howl-wadeennada laamaha shanta luqadood ee lala mataaneeyey Ekot waxey sidoo kale halkoodii ka sii wadi doonaan iney war-bixinno ku sameeyaan luuqadahooda.
Laanta roomiga ee lagu magacaabo Radio Romano waxaa dhankeeda lala mataaneeyey laanta idaacadda ee ku hadasha af-ka finishka ee lagu magacaabo Sisuradio.